चीन सुरक्षित, आगो प्रतिरोधी स्टील, फिंगरप्रिन्ट कोड लक, सबै प्रकारका सुरक्षित कारखाना र उत्पादकहरू बोडा
विज्ञान र टेक्नोलोजीको विकासको साथ, आजको सुरक्षित एन्टी-चोरी कार्यबाट साधारण असंख्य प्रकारहरूमा विकास भएको छ, जस्तै- चोरी, आगो निवारण, विरोधी चोरी, फायर प्रूफ, एंटी म्याग्नेटिक, घरेलु, व्यापार, होटल , बन्दुक, कागजात, डाटा, आदि।
यसको विशेष प्रकार्य फर्निचर र एन्टि-चोरीको कारण, सुरक्षितको चयनमा विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ। सुरक्षितको चयन मूल रूपमा निम्न पक्षहरूबाट विचार गर्न सकिन्छ:
१. स्टील प्लेट सामग्री चयन: स्टिल प्लेटको मोटाई, सामग्री र मूलबाट भिन्न, जुन इलेक्ट्रिक ड्रिल र काट्ने जस्ता विशेष उपकरणहरूको प्रयोग गर्दा सुरक्षितको असर क्षमतासँग सम्बन्धित छ।
२. निर्माण र वेल्डिंग: क्याबिनेटको निकाय एकै समयमा बनेको छ कि छैन जाँच्नुहोस्, क्याबिनेट ढोका र ढोकाको फ्रेमको बिचमा फाटो छ कि छैन, र स्विच लचिलो छ कि छैन जाँच्नुहोस्। यदि अन्तर धेरै ठूलो छ भने, anti prying समारोह कमजोर हुनेछ। फायरप्रूफ सुरक्षितको लागि, धेरै ठूलो अन्तरलाई अनुमति छैन।
T.परम्परागत संरचना: यो सुरक्षितको मूल हो। किनकि यो बक्समा छ, प्रयोगकर्ताले यसलाई देख्न सक्दैन, तर यो कुञ्जी हो कि टेक्निकल खोल्नबाट रोक्नुहोस्। आन्तरिक परम्परागत संरचना ठीक छ कि छैन र प्रसारण लचिलो छ कि भनेर जाँच गर्न प्रयोगकर्ताहरूले ढोका प्यानलको पछाडि कभर खोल्न व्यापारीलाई सोध्न सक्छन्। थप रूपमा, हामीले लक बोल्टको संरचना पनि जाँच गर्नुपर्दछ। लक बोल्टको व्यास बाक्लो हुनु पर्छ। अब लोकप्रिय लक बोल्ट ढाँचामा एक राम्रो विरोधी खोल्ने प्रभाव छ।
L. लक: यदि परम्परागत संरचना सतह हो भने, तब लक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। लक नष्ट गर्नु वा कुञ्जीको नक्कल गर्नु भनेको चोरी विरोधी संयन्त्रको मुटु नष्ट गर्नु बराबर हो। जटिल लकले क्षति र कुञ्जी प्रतिलिपिलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्दछ।
A. सहायक भागहरू: स्पेयर पार्ट्सको प्रशोधनले उनीहरूको प्रदर्शनको विश्वसनीयतालाई पनी परिवर्तनशील प्रयोग वातावरणसँग सामना गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
A. अलार्म प्रकार्य: त्यहाँ एक स्वचालित अलार्म प्रकार्य छ, र केहि परिस्थितिमा स्वचालित अलार्म दिन सकिन्छ (जस्तै चाल, हिटि or वा तीन गलत कोडहरू)। निस्सन्देह, अधिक सक्रिय सक्रियता सर्तहरू, राम्रो। वर्तमानमा धेरै सफाइहरूमा स्वचालित अलार्म प्रकार्य हुँदैन, वा त्यहाँ केही स्वचालित अलार्म सक्रियता सर्तहरू छन्। तपाईंले खरीद गर्दा स्पष्ट रूपमा सोध्नु पर्छ।
A.अन्टी क्षीण उपचार: यदि यो प्रक्रिया राम्रोसँग सम्बोधन गरिएको छैन भने यसले बाकसको उपस्थितिलाई असर गर्दछ, र गम्भीर मामिलाहरूमा, यसले कार्यलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ। एन्टी चोरी चोरी को भित्र र बाहिर पेंट, स्प्रे प्लास्टिक र अन्य सतह विरोधी जंग उपचार हुनुपर्छ। मेकानिकल सुरक्षित।
App. रूप: भारी र नीरस अब उपभोक्ताको सुरक्षित कुरा बुझ्दैनन्। मानिसहरूले यसलाई घरको सजावटको रूपमा व्यवहार गरिरहेका छन्। सबै भन्दा पहिले, सतह राम्रो छ कि छैन र पेंट पनि छ कि छैन अवलोकन गर्नुहोस्। दोस्रो, र color र आकार उनीहरूको मनपर्ने प्रकारको हो कि अवलोकन गर्नुहोस्, र खरीदको लागि वास्तविक कार्यालय वातावरणसँग मिलाउनुहोस्।
S। आकार: तपाईको वास्तविक आवश्यकता अनुसार सुरक्षित को आकार मापन गर्नुहोस्। यदि यो पर्खालको कुनामा राखिएको छ भने, आकारलाई धेरै विचार गर्न आवश्यक छैन। यदि यसलाई लुकाईएको ठाउँमा राख्न आवश्यक पर्दछ, जस्तै क्याबिनेट, सेफको आकार अधिकतम cm० सेन्टीमिटर हुन्छ र तौल k० किग्रा भित्र हुन्छ। यो नोट गर्नु पर्दछ कि cm० सेमी से अधिकको उचाई संग प्राय: safes तल पाels्ग्राहरुले सुसज्जित छन् र कहिँ पनि सार्न सकिन्छ। अब त्यहाँ सुरक्षित को धेरै आकार र विशिष्टता छन्। सामान्यतया, अधिकतम आकार १०० सेमी भन्दा बढी हुन सक्दछ। यो पनि अनुकूलित गर्न सकिन्छ। यो अनुकूलन गर्न १ 15 दिन लाग्छ।
१०. ब्याट्री: विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक पासवर्ड सुरक्षितको लागि। बिल्ट-इन ब्याट्रीको साथसाथै, इलेक्ट्रोनिक पासवर्ड सुरक्षितसँग बाह्यको खाली ब्याट्री बक्स हुन्छ। खरीद गर्दा, तपाईंले ध्यान दिन यो पूरा भएको छ कि आवश्यक छ। BOSENDA सुरक्षित ब्रान्डको प्यानलमा पावर डिस्प्ले पनि छ, जसले वास्तविक सञ्चालनमा धेरै सुविधा प्रदान गर्दछ।
BOSENDA सुरक्षित सुरक्षा बक्सको पूर्ण विवरण / सुरक्षित, अग्नि-प्रतिरोध सुरक्षा बक्स / सुरक्षित र विभिन्न कार्यहरूको साथ सुरक्षित र माथि वर्णन गरिएको, वजन ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ, कुञ्जी लक, फिंगरप्रिन्ट लक, पासवर्ड लक अनुसार प्रदान गर्न सकिन्छ। बिभिन्न आवश्यकताहरू, सामान्य स्टील प्लेटदेखि सुपर हार्ड स्टील प्लेटको सामग्री, विभिन्न आवश्यकता अनुसार अनुकूलित। हजारौं युनिटहरूको मासिक उत्पादन, द्रुत डेलिभरी, ग्राहक पर्खने समयबाट बच्न। उच्च क्षमताको साथ उत्पादन, सबै लिंकहरूको सख्त नियन्त्रण।
अघिल्लो: स्क्रू, प्लास्टिक विस्तार स्क्रू, विस्तार नेल विस्तार स्क्रू, cacable क्लिपको साथ नाखाहरू विस्तार गर्नुहोस्
अर्को: कोण चक्की, प्रभाव ड्रिल, हथौड़ा, ली-आयन ड्रिल, शक्ति उपकरण
कोण चक्की, प्रभाव ड्रिल, हथौड़ा, ली-आयन ड्राइ ...
पाइप रिन्च, भारी शुल्क प्लास्टिक पाइप रेन्च, adj ...
उपकरण सेट, हात उपकरण, घर उपकरण सेट, कार मर्मत ...
वुडवर्किंग तीन पोइन्ट ड्रिल, वुडवर्किंग डा ...
चक्र ब्लेड पीस, राल काट्ने ब्लेड, स्टे ...